ညဘက်တွင် အိပ်ကောင်းခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » ညဘက်တွင် အိပ်ကောင်းခြင်း
Posted by မမလေး on Sep 22, 2010 in Health & Fitness | 1 comment
Forward သူတို့နဲ့ အတူမအိပ်ပါနဲ့
ညဘက်တွင် အိပ်ကောင်းခြင်း အိပ်ပျော်စေသည့်အချက် ရှာတွေ့
ဗြိတိန်သိပ္ပံပညာရှင်တို့က ညအိပ်သည့် အချိန်တွင် အိပ်ကောင်းခြင်း အိပ်ပျော်စေသည့် အဓိက အချက်ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ သိပ္ပံပညာရှင် တို့၏ ဖော်ပြချက်အရ လူတို့၏ ဦးနှောက်တွင်းရှိ ဦး နှောက်လှိုင်း ပေါက်ကွဲမှုက လျှပ်စစ်ဓာတ် ဆိုင်ရာစေ့ဆော်မှုကို ဖြစ်စေခြင်း ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဦးနှောက်တွင်းရှိလှုပ်ရှားမှုက အသံဗလံများ ကို စစ်ထုတ်ပေးသည့်အတွက် အချို့သူများကို ကောင်းစွာ အိပ်ပျော်စေခြင်း ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ဦးနှောက်လှိုင်းများသည် အသံဗလံများကို စိတ်ထဲ တွင် ပေါ်လာစေရန် စဉ်းစားပေးသည့်လက္ခဏာ ဖြစ်လေရာ ထိုအသံဗလံများက အိပ်မပျော်ခြင်းကို ဖြစ်စေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဦးနှောက်ကိုချော့ပေးခြင်းသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်ဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုကို ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်ပျော်စေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သုတေသီ တို့က ပြောကြားခဲ့ကြသည်။ အချို့သော သူများသည် ဆူညံသံများ ထွက်ပေါ်နေလျှင်ပင် အဘယ် ကြောင့် ကောင်းစွာအိပ်ပျော်ရသည်။ အချို့လူများက အဘယ်ကြောင့် အခြား သူများထက် ပို၍ အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်ပျော်ရသည်ကို အသေးစိတ်စမ်း သပ် စစ်ဆေးရန် ကြံစည်လျက် ရှိသည်ဟု ဟားဗတ်ဆေးပညာကျောင်းမှ ဂျက်ဖရီအယ်လင်ဘိုဂျင်က ပြောကြားခဲ့သည်။ ဒေါက်တာအယ်လီဘိုဂျင်က ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်သော လူ ၁၂ဦး၏ ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုကို စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးခဲ့ရာတွင် ဦးနှောက် တွင်းရှိ လျှပ်စစ်လှိုင်း လှုပ်ခတ်မှုက အသံဗလံများကို ခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်းတွေ့ ရှိခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်။ သို့ရာတွင် အချို့လူများသည် အခြားသူများ ထက်ပို၍ လျှပ်စစ်လှိုင်း ပိုမိုလှုပ်ခတ်မှု ပြုသည်ကိုမူ ရှင်းလင်းစွာ မသိရသေးဟု သိရ သည်။
နာရီဟာ ရေဒီယို သတ္တိကြွ ထုတ်လွှင့်မှုအတော်မြင့်မားပါတယ် … နာရီဟာ သေးငယ်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ ၀တ်ဆင်ပြီး အချိန်ကြာကြာအိပ်ခဲ့ရင် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကို ဆိုးကျိုးတွေ အများကြီး ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်တဲ့….ဒါကြောင့်အိပ်တဲ့အခါနာရီကို ချွတ်ပြီးအိပ်ကြပါ.. ၂
၂ . အမျိုးသမီးများ ဘရာဝတ်ပြီးမအိပ်ပါနဲ့
အမေရိကားမှ ပညာရှင်များလေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ အမျိုးသမီးများ ၁၂ နာရီ ထက် ကျော်လွန်ပြီး အတွင်းခံ ( ဘရာ ) ကိုဝတ်ဆင်ပါက ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေ အလွန်မြင့်မားကြောင်းသိရပါတယ် … ဒါကြောင့် ညအိပ်ယာ ၀င်ချိန်မှာတော့
၃. ဖုန်းနဲ့အတူတူ မအိပ်ပါနဲ့ မိမိ လက်ကိုင်ဖုန်းကို မိမိရဲ့အိပ်ယာဘေး ဒါမှမဟုတ် အနီးအနားမှာ ထားခြင်းကို အားမပေးပါဘူး..တစ်ချို့က ဖုန်းကို နိုးစက်အနေနဲ့ သုံးပြုတတ် ကြပါတယ်…. အဲလိုသုံးရင်လည်း ဖုန်းကို မိမိနဲ့ဝေးနိုင်သမျှဝေးဝေးမှာ ထားသင့်ပါတယ် ….. ပညာရှင်များက လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ဖြစ်တဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်း အပါအ၀င် တယ်လီဗေးရှင်း စက်များဟာ အသုံးပြုနေတဲ့အခါမှာ သံလိုက်လှိုင်းများကိုထုတ်လွှင့်နေကြကြောင်း သက်သေပြ ခဲ့ကြပါတယ်.. အဲဒီသံလိုက်လှိုင်းများဟာ ကျွန်တော်တိုရဲ့ အာရုံကြော အဖွဲ့အစည်းကို အနှောက်အယှက် ပေးစေနိုင်ပါတယ် . . . ဒါကြောင့် ဖုန်းကို အိပ်ယာဘေးမှာ ထားအိပ်မယ် ဆိုရင်တောင် ဖုန်းကိုပိတ်ထားသင့်ပါတယ်…..
ညအိပ်ရာဝင်တဲ့ အခါလိမ်းထားတဲ့မိတ်ကပ်များကိုမဖျက်ဘဲ အိပ်တတ်သူများဟာ ရေရှည်မှာ အရေပြားကို ဆိုးကျိုး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်… မိတ်ကပ်လိမ်းပြီး အိပ်ခြင်းအားဖြင့်အရေပြားပေါ်ရှိ ချွေးပေါက်များကို ပိတ်ဆို့စေပြီး ၀က်ခြံတင်းတိပ် အစရှိတဲ့ အရေပြား ပြသာနာမျိုးစုံကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ် …. အိပ်ချိန်ကို ပြည့်ပြည့်၀၀နဲ့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ရရှိဖို့လဲလိုအပ်ပါတယ် … ဒါကြောင့် ညအိပ်ယာ ၀င်ရင် မျက်နှာကို သန့်စင်ပြီးမှအိပ်စက်ကြပါ …
၅. သူတစ်ပါးရဲ့ယောင်္ကျား ၊မိန်းများနဲ့အတူတူမအိပ်ပါနဲ့
နောက်ဆုံးတစ်ခု အတူတူမအိပ်သင့်တဲ့ အရာကတော့ သူတစ်ပါးရဲ့ကာမပိုင်ရှိပြီးသူ လင်သား .. သူတစ်ပါးရဲ့မိန်းမ များနဲ့အတူတူ မအိပ်စက်သင့်ပါဘူးတဲ့… အဲဒီလို ခဲ့အိပ်မယ် ဆိုရင် စအိပ်စဉ်တုန်းက အိပ်ယာပေါ်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် နိုးလာရင်တော့ ထောင်ထဲရောက်ချင် ရောက်နေပါလိမ့်မယ်။ ( ခြင်ထောင်ဖြစ်ချင် ဖြစ်မှာပေါ့နော့၊ ခြင်ကိုက်မှာဆိုးလို့ နေမှာ။) ဟတ်ဟတ် ကဲကဲ အတည် ပြောပါမယ်။ အဲဒီလို ခဲ့အိပ်မယ်ဆိုရင် ရရှိလာမဲ့ အကျိုးဆက်ကတော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ကိုယ့်ရဲ့ နာမည်၊ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ ကိုယ့်ရဲ့မိသားစု၊ ကိုယ့်ရဲ့ အနာဂတ် စတာတွေနဲ့ အလဲ အထပ် လုပ်ရတတ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်း အားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။
Forward Mail မှ ရရှိပါသည် . . .
ကျနော်ကိုယ်တွေ့ပြောရရင် လူတစ်ယောက်အိပ်ပျော်ဘို့ က ကျန်းမာရေးကောင်းမှ အိပ်ပျော်တာပါ။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒီနေ့ ဟာ ကျနော်ဆေးရုံတက်ရတဲ့နှစ်ပါတ်လည်နေ့ပါ။
မနှစ်က ဒီအချိန်မှာ ည ညဆိုဘယ်လိုမှအိပ်မရပါဘူး။
အိပ်ပြီဆိုရင်လဲ ခဏလေး ဘဲ ချွေးစေးတွေပြန် ပြီးနိုးနိုးလာတာပါ။
အိပ်ပျော်တဲ့အခိုက်မှာလဲ ထိတ်လန့်စရာကောင်းတာ စိတ်မောရတာ ဆိုတဲ့အိပ်မက်တွေ တောင်စဉ်ရေမရလျှောက်မက်နေပါတယ်။
အခုကျန်းမာရေးကောင်းတော့ အိပ်မယ်ဆို ခေါင်းအုံးနဲ့ခေါင်းထိတာနဲ့ အိပ်ပျော်သွားလိုက်တာ လင်းတရေးပါဘဲ။
ကိုယ်တွေ့ပြောရရင် ကျန်းမာရေးကောင်းမှ ကောင်းကောင်း အိပ်ပျော်တာပါလို့။